ငါ့ mind ထဲမှာ အဲ့ဒီ ၁၈ ခု (ခင်အောင်အေး) | လမ်းအိုလေး
ငါ့ mind ထဲမှာ အဲ့ဒီ ၁၈ ခု (ခင်အောင်အေး)
March 28, 2014 by lanolay	Leaveacomment
ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတဲ့ ငါးလို –
ဟိုတစ်ယောက်ရေ .. သို့
What’s on your mind? ဆိုတဲ့ စာတမ်းကလေးကို သတိထားမိသလား။ အကယ်၍ ခင်ဗျားဟာ Facebook နဲ့ လက်ပွန်းတတီးရှိသူတစ်ယောက် ဆိုရင်ပေါ့လေ။ တရက်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်လှစွာသော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဟာ အဲဒီ စာတမ်းလေးကို ဂြိုဟ်ကျပါတယ်။ ‘ငါ့ ခေါင်းထဲမှာ ဘာမှမရှိဘူး’ ‘စိတ်ထဲမှာ စိတ်ပဲရှိတယ်’ အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ အသေအချာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကြောင့် ဒီစာတမ်းကလေးကို သတိထားမိသွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ FBဖွင့်ထားချိန် ဖတ်စရာလဲ မယ်မယ်ရရမရှိ၊ ပို့စ်တစ်ခုခု တင်ဖို့လဲ အရှိန်ပျက်နေတဲ့ အခါများမှာ ဒီစာတမ်းလေးက ကိုယ့်ကို ‘စား’နေတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်က ကိုယ်ဟာ ‘ဘီအာရ်’လို့ အညွန်းနာမ်စား တစ်ခုကို ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ကဗျာလေးတွေ တစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ် ရေးတင်နေတဲ့အချိန် ‘ဟိုတစ်ယောက်’နဲ့လည်း အဆင်ပြေလိုက် ကချိကချောက်ဖြစ်လိုက် ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။
ဒါနဲ့ပဲ ကောက်တိကောက်ကွေးစိတ်တွေ ထကြွတဲ့တစ်ရက်မှာ What’s on your mind? ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးပေါ်ကို ကာလ်ဆာချလိုက်ပြီး ‘ငါ့ mind ထဲမှာ’လို့ ချရေးမိလိုက်တယ်။ တကယ်တော့ ‘ငါ့ စိတ်ထဲမှာ အခုရှိနေတာတွေ ဒါပဲ’ လို့ အဲ့ဒီ သက်မဲ့ စာတမ်းလေးကို တုံ့ပြန်ဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ What’s on your mind? ကို ပြန်ချိတ်ထားချင်တာနဲ့ mind ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကိုတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ယူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စိတ်ထဲဖြစ်နေ ရှိနေတာကို ထင်ဟပ်စေမယ့် စကားလုံးတွေ အဲဒီ စာတမ်းရဲ့အောက်မှာ ချရေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ခုပြီး နောက်တစ်ခု၊ တချို့ရက်တွေဆိုလည်း ၂ပုဒ် ၃ပုဒ်လောက်။ မရေးဖြစ်တဲ့ ရက်တွေလည်း ရှိတာပေါ့။ ပြီးတော့လည်း မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပါပဲ။ တခြား ရေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာတွေကို အားတဲ့အခါ စုသိမ်းဖြစ်ပေမယ့် ဒီ စတေးတပ်စ် စာသားလေးတွေကိုတော့ ကဗျာလို့ မသတ်မှတ်မိတာမို့ မသိမ်းဖြစ်ခဲ့ဘူး။
စိတ်တွေ ဝရုန်းသုန်းကားနဲ့ ပြိုလဲကျသွားတဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ ငါ Facebookနဲ့ ခဏလောက် ဝေးဝေးနေရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့ ၂ဝ၁၂ ကုန်ကာနီးကတည်းက ချိန်ရွယ်ခဲ့တာကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဖြစ်လာတော့တယ်။ ဒါနဲ့ Deactivate မလုပ်ခင် မှာ အရေးကြီးတာ ဘာလေးတွေ ရှိနေအုန်းမလဲ၊ ရှိရင် သိမ်းထားဖို့ နောက်ကြောင်းပြန်လိုက်တဲ့အခါ ဒီ စတေးတပ်စ်လေးတွေကိုပါ ခလုပ်တိုက်မိပြီး ချန်မထားရက်သလို ဖြစ်လာတာနဲ့ တပုဒ်မကျန် ပြန်ကူးဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ စိမ်ပြေနပြေ ပြန်ဖတ်ရင်း ဟာ ဒါလေးတွေလည်း ကဗျာဖြစ်နေတာပါပဲလားလို့ တွေးမိ ခံစားမိတော့တယ်။ ဒါနဲ့ ဒီစတေးတပ်စ် အုပ်စုဝင် ကဗျာလေးတွေကို Ebook တစ်အုပ်အဖြစ် ဖန်တီးချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတော့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့၊ ကတင်မင်းထက်ကိုပဲ အပူကပ်ရပြန်တယ်။ သူကလည်း ဒါမျိုးဆို ‘အဆင်သင့်ပဲဟေ့’ ဂိုဏ်းသား ဆိုတော့ မဆိုင်းမတွပဲ စီစဉ်ဖြစ်တယ်။
ကဲ ကိုယ့် mind ထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီတုန်းက ဘာတွေရှိခဲ့သလဲဆိုတာ ဟောဒီမှာ ခင်ဗျားတို့ ခြေရာခံကြည့်နိုင်ပါပြီ။
၆ မတ်ခ်ျ ၂ဝ၁၄ ဖရာ့ပရာဒင်န် ဘန်ကောက် နံနက် ၈း၄၃ နာရီ
အမြဲတမ်း ငြိမ်သက် ပျံ့ ပြူး သာယာနေစမ်းပါလို့
ရယ်စရာ ပေါတောတော အစီအစဉ် လာနေတယ်
စိတ်ကို အဲ့ဒီထဲ ခဏသွားထိုးထည့် ကြည့်လိုက်အုန်းမယ်။
ဟိုး အောက်မှာ ပိညပ်နေတယ်။
မျက်ရည်နဲ့သီထားတဲ့ကြိုးကနေ ထ တောက်တဲ့မီးညွန့်
တောအုပ်ကလေးတစ်ခုရဲ့ အစပ်မှာ တွေ့တယ်၊
ချစ်သူက တကိုယ်လုံး အဖြူရောင်ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့၊
ငါ့ ကဗျာဆရာဘဝရဲ့ ညစ်နွမ်းမှုတချို့ရှိခဲ့တာ
ဝေဝါး၊ မထင်မရှား၊ သီမှုန်
မထင်မရှား၊ သီမှုန်၊ ဝေဝါး
သီမှုန်၊ ဝေဝါး၊ မထင်မရှား
ကြယ်ကလေးများနဲ့ ပြည့်လိုက်ပျောက်လိုက် လ
ငါတို့အချစ်တွေ ဖွဲ့နွဲ့ဖို့ နိမိတ်ပုံကောင်းများပဲပေါ့။
ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတဲ့ ငါးလို —
ငါ လည်းဒီမှာ ငါ့ဘဝနဲ့ငါ
မင်း လိုက်မလာနဲ့နော်..လို့ ပြောမိ
မနက်ဖြန်ကို ကျိန်းသေတွေ့ရဦးမယ် ဆိုတဲ့
၁၃ ဂဏန်း ကို
အိုပဲ သေတော့မယ် စာသင်လာတာ
ဒီ စာလုံး၂လုံးကကို မတက်တော့ဘူး။
ကဲ ဒါပဲ ထပ်ရေး —
အချစ်၊ အချစ်၊ အချစ်၊ အချစ်
ခရီးမိုင်တွေနဲ့ ရေတွက်ရတာမျိုး မဟုတ်ပဲ
Megabyte တွေ Speed တွေနဲ့
ဒါကို ငါက လက်ခံရယူရုံပဲ
ဘာမှ စောဒက တက်ခွင့်မရှိဘူး
အရက်က လက် ၄လုံးကျန်သေးတယ်
ဒီညကို ဖြတ်ဖို့ —
အချစ် ဆိုတာ ခရမ်းချဉ်သီး
ကိုယ့် mind ထဲမှာ
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီတုန်းက
ငါ့ mind ထဲမှာ အဲ့ဒီ ၁၈ ခု (ခင်အောင်အေး) PDF – 148KB
(ငါ့ mind ထဲမှာ အဲ့ဒီ ၁၈ ခု – ခင်အောင်အေး)
Categories: Kabyarz, PDFs | Tags: ခင်အောင်အေး, ebook, Kabyarz, Khin Aung Aye, PDF | Permalink.
နှလုံးသားထဲကို ရေမသွန်ပါနဲ့ (မောင်ချောနွယ်)